Ny fomba fampianarana any Singapore - inona no atao?
Ny pedagojia amin'ny fotoana rehetra dia nikatsaka ny hamolavola rafitra fanofanana tsara indrindra, izay ahafahan'ny mpianatra mandray ny fahalalana sy fahaiza-manao faran'izay betsaka. Ary ny taonan'ny teknolojia maoderina dia tsy fahita firy.
Ny laharam-pahamehana amin'ny fanabeazana vaovao dia mandrisika ny mpampianatra hitady sy hampiditra teknolojia fampianarana maoderina any an-tsekoly izay manampy amin'ny fanatontosana ny vokatry ny fanabeazana sy ny fampiofanana. Ary mihamitombo hatrany any am-pianarana any amin'ny firenena maro ny rafitra fanabeazana Singaporeana.
Famaritana ny fomba fiasa Singapore
Ny sokajy dia zaraina ho vondron'olona 4, ny vondrona tsirairay - ekipa mitambatra, manana fitaovana miasa: taratasy, kahiezy, penina, sns. Ny ekipa dia mahazo asa ary mitabataba eo amin'ny tontolo iainan'izy ireo. Amin'ny fanamafisam-peo dia miova haingana ny ekipa, mifangaro ny vondrona ary misy ekipa vaovao (efatra na efatra). Misy fanontaniana na asa vaovao iray nomena, ny ankizy ao anatin'ny fotoana voafetra dia manakombona mavitrika vaovao sy fahaiza-manao. Ny mpianatra sangisangy amin'ny lesona toy izany dia tsy mitranga.
Amin'ny fametrahan'ny mpampianatra "atsaharo!" Ny fianarana samirery ary ny mpampianatra dia manomboka mamintina ny vokatra ankapobeny.
Aoka hotenenina fotsiny hoe: ny fomba fitantanana Singaporeana dia andiam-pampianarana sy fomban-tany, antsoina hoe rafitra Singapore, mba handalina ny lesona tsara kokoa, ny mainna dia voatendry ho telo ambin'ny folo, fa raha ny marina dia misy ampolony maromaro.
MENEDZH MET - fitantanana kilasy, fizarana ny mpianatra ao anatin'ny ekipa iray misy olona 4: mipetraka eo akaikiny, ary iza - raha ny mifanohitra amin'izany, ny mpanohitra, ny fomba hifandraisana amin'izy ireo.
FIVORIANA FIFIDIANANA - mifantoka amin'ny palmin'ny mpampianatra ho mariky ny fiandohan'ny lesona na ny andraikitra.
CLOCK BADDIS - "namana amin'ny vanim-potoana", ny fahombiazan'ny vondron'olona iray manokana ho an'ny fotoana iray manokana, satria aorian'ilay famantarana dia hiova ny fananganana ekipa.
TЭК ОФ - ТАЧ ДАУН - "mitsangàna - mipetraha" - ny rafitry ny olom-pantany amin'ny kilasy ary ny fahazoana vaovao. Rehefa raisina ny fanontaniana, toy ny valiny mahafa-po, mitsangana ireo mpianatra, mbola tsy miara-mipetraka ireo tsy mitovy hevitra.
JOTT TOAST - "manorata hevitra iray" - asa an-tsitrapo manoratra, manonona azy mafy. Vantany vao nandinika ny valiny.
TEC - TEK - TUU - fampiroboroboana ny fisainana manan-tsaina sy mamorona amin'ny ankizy ao amin'ny tetikasa mba hanolorana soso-kevitra amin'ny teny tsy maintsy atao ao amin'ny tetikasa. Voasolo tanteraka ny isa ny teny, ohatra.
STE ZE CLASS - "class mix" - azon'ireo mpianatra mivezivezy malalaka manodidina ny kilasy mba hanangona eritreritra sy valiny be indrindra ao amin'ny lisitra. Taorian'ny fandinihana ankapobeny.
CONERS - ny fizarana ny mpianatra eo amin'ny zoron'ny kilasy araka ny safidy nofidiany.
Ny SIMULTYNIUSS ROUND TABLE dia rafitra iray izay ahafahan'ny mpikambana efatra ao amin'ny vondrona manatanteraka asa an-tsoratra, ary aorian'izany dia alefaso amin'ny mpifanolo-bodirindrina manodidina azy ireo ny mpifaninana.
КУИЗ-КУЗА-ТРИЙД - "manontany - fanadihadiana - karatra fifanakalozan-dresaka" - mifampitaha ny mpianatra ary manofana amin'ny fitaovam-pianarana.
TIME PEA SHEA - ireo mpandray anjara roa dia mifanakalo valiny feno ho an'ilay asa amin'ny fotoana.
MIX PEA SHEA - fifangaroan'ny kilasy miaraka amin'ny mozika, mamorona mpivady mahiratra rehefa hifarana ny mozika, ary hiresaka momba ny lohahevitra amin'ny valiny fohy (RELLY ROBIN) na feno.
FAMPIANARANA FIKAMBANANA MIKASIKA - Mampifangaro mpianatra amin'ny mozika rehefa mijanona izy - mangatsiatsiaka ary mamorona vondrona, izay miankina amin'ny valin'ny fanontaniana napetraka.
Fotoana mafana - ny rafitry ny TIM CHIR - fanatanjahan-tena mampihetsi-po ho an'ny fihetseham-po sy ny fanahy, ny hira. Mafana, manaova, mitsikia.
Ny fahombiazan'ny rafitra Singaporeana
Mpianatra maro no miatrika tsy fahampian'ny fahalalàna mamaky sy mamorona amin'ny mpianatra amin'izao andro izao, ary ity no fitaovana mahery indrindra amin'ny fahazoana fahalalana momba ny lohahevitra sy ny fampivelarana ny fahaiza-manao. Ny teknolojian'ny fampianarana ao Singapore ao amin'ny lesona dia mampitombo ny karazana endrika ary midika izany fanatsarana sy fanentanana izany, anisan'izany. mpianatra mavitrika ary mavitrika.
Ny fampiasana rafi-pampianarana mandroso dia ahafahana mamerina vaovao indray ny fizotry ny fianarana sy ny fitarihana fampianarana amin'ny tarika sy toeram-piasana miaraka amin'ny mpianatra.
Ny fomba fiasa ao Singapore dia toy izao manaraka izao: ny vondrona dia zaraina ho vondrona na paika ary hianatra ny ampahany kely amin'ny fitaovana. Isaky ny mpianatra dia manandrana ny anjara asan'ny mpampianatra iray, manazava ny maha-zava-dehibe ny fanontaniana amin'ny teniny amin'ny mpifanolobodirindrina, ary ny mifamadika amin'izany. Ary ny mpampianatra dia mitondra ny antsoina hoe "fanaraha-maso tafiditra": mihaino amin'ny iray amin'ireo solontenan'ny vondrona mikrô, mandinika azy ireo, manitsy, manohana ary mitarika azy ireo.
Ny rafi-pampianarana ao Singapore dia manana tombontsoa maro:
Tokony ho ny antsasaky ny ankizy ao am-pianarana dia mianatra miteny sy mihaino amin'ny fotoana iray ihany, manitsy ny fahadisoan'ny hafa ary mametraka izany, manitsy sy manatsara ny fahalalany.
Mampitombo ny asan'ny mpianatra tsirairay ao anatin'ilay dingana, indrindra eo amin'ny sehatry ny "mpampianatra".
Mpianatra tsirairay dia eo afovoan'ny fanontaniana, mila mifandray izy mba hampianarana ny mpiara-mitory aminy izay fantany, ka mahatonga azy hanana toe-tsaina tsara eo amin'ny fomba fianarana.
Ny fampiofanana ho an'ny ankizy tsy misy ankoatra dia lasa mahaliana sy mahomby, ary mihamitombo ny kalitaon'ny fahalalana momba izany.
Ny mpianatra dia manatsara ny fahaiza-mifanakalozan-kevitra, ny fisainana mamorona, mianatra manara-maso, manakiana ary manaiky tsikera.
Ny lesona dia lasa toy ny lalao mahavariana sy manankarena ary mitondra fihetseham-po miavaka tsara.
Maldives - tora-pasika
Malezia - toetoetran'ny mpizaha tany
Fitsidihana ara-pahasalamana any Korea
Ny akne eo amin'ny mofomamin'ny vehivavy - antony
Megan Fox tsy misy fananganana
Famafazana simika - alohan'ny an'ny andaniny
Ny laminan'ny "knob" amin'ny fanjaitra mitongilana
Simulator ellipsoid - ahoana no fomba handaminana ny lanjany?
Tomatom-boankazo sy tongolo gasy
Nahoana no mamomamo manonofy?
Fanontana plaka vita amin'ny polyurethane
Ny fototeny jeneraly - toetra mahasoa
Fandotoan-tena ao amin'ny ovulation
Elegant akanjo amin'ny prom ao amin'ny kindergarten
Nicholas Holt sy Kristen Stewart
Ahoana no hisafidianana ny haben'ny volavolan-tsavily ho an'ny fitomboana?
Ozokerite - fampiharana